हेर्नुहोस्, २०७७ साल फागुन १९ गते बुधबारको राशिफलमा तपाईँको भाग्य :: Times of Pradesh
हेर्नुहोस्, २०७७ साल फागुन १९ गते बुधबारको राशिफलमा तपाईँको भाग्य
आज फाल्गुन १९ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल !
सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रशंसाको पात्र बन्नुहुनेछ। धन लाभको योग रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सुख र सन्तोषको अनुभव हुनेछ। बौद्धिक चर्चामा हिस्सा लिनुहुनेछ। वैचारिक रुपले आवेशमा रहनु हुनेछ। समाधानकारी व्यवहारबाट अधिक लाभ होला।
दिन आनन्दपुर्वक बित्नेछ। मानसिकरुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। कार्य निर्धारित रुपले योजना अनुसार पूर्ण हुनेछ । आर्थिक लाभ होला। अधुरो कार्य पूर्ण हुनेछ। माईतबाट आनन्दको समाचार मिल्नेछ तथा लाभ हुनेछ। स
जीवनसाथी र सन्तानको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। कुनै प्रकारको वाद-विवाद वा बौद्धिक चर्चाबाट टाढा रहनुहोला। अपमान नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। मित्रमा खर्च हुनेछ। पेट सम्बन्धित बिरामीबाट समस्यामा रहनुहुनेछ। नयाँ कार्यको आरम्भमा निष्फलता मिल्नेछ।
ग्लानिले तपाईको मन व्यथित रहनेछ। प्रफुल्लितता, स्फूर्ति र आनन्दको अभाव रहनेछ। परिवारसँग झगडा हुनेछ। धनको खर्च हुनेछ। समयानुसार भोजन मिल्नेछैन। अनिन्द्राले सताउनेछ।
दिन सुख-शान्तिपूर्वक बित्नेछ। साथी तथा आफन्तसँग निकटता अनुभव गर्नुहुनेछ। सम्बन्धको भावनाको गहिराई बुझ्नुहुनेछ। कुनै रमणीय पर्यटनस्थलमा जाने योजना बनाउनु हुनेछ। मानसिक रूपले चिन्ता रहित रहनुहुनेछ। कार्य-सफलताको योग रहेको छ ।
परिवारमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। बौद्धिक चर्चामा नउत्रिनुहोला। मिष्टान्न भोजन मिल्नेछ। व्यर्थ खर्च नगर्नुहोला। विद्यार्थिको लागि कठिन समय रहेको छ।
व्यवस्थितरुपले आर्थिक योजना बनाउनु हुनेछ। कुनै सिर्जनात्मक प्रवृत्ति हुन सक्ला। सिर्जनात्मक शक्ति श्रेष्ठ रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थताको अनुभ गर्नुहुनेछ। दृढ विचारको साथसाथै कार्य पूर्ण गर्नुहुनेछ। आत्मविश्वास वृद्धि हुनेछ।
स्वभावमा उग्रता र बोलिमा ध्यान राख्नुहोला। शारीरिक शिथिलता र मानसिक चिन्ताले मन निराश रहनेछ। आफन्त र परिवारसँग वाद-विवाद होला। अदालती कार्यलिई सकेसम्म टाल्नुहोला। मनोरंजनमा खर्च हुनेछ।
दिन तपाईको लागि लाभदायी रहेको छ। आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक क्षेत्रमा लाभ होला। मित्र र परिवारसँग पर्यटन स्थलमा जानाले आनन्द प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्यापारमा लाभदायी दिन रहेको छ। परिवारमा सुख-शान्ति बनिरहनेछ।
परिवार र सन्तानको विषयमा आनन्दको साथ-साथै सन्तोष अनुभव गर्नुहुनेछ। मित्र र आफन्तसँग भएको भेटलले मन प्रसन्न रहनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रमा धन तथा मान-प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ। उच्च अधिकारीको प्रसन्नता तपाई प्रति बनिरहनेछ। व्यवसायमा पदोन्नति मिल्नेछ।
प्रतिस्पर्धिसँग वाद-विवाद नगर्नुहोला। शारीरिक रुपले अस्वस्थता बनिरहनेछ। शिथिलता र आलस्य बनिरहनेछ। मानसिकरुपले प्रसन्नता बनिरहनेछ। व्यवसायमा उच्च अधिकारीसँग कार्य गर्ने समय सम्हालेर रहनुहोला। सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ। विदेशबाट समाचार मिल्नेछ ।
अनैतिक कार्यमा नअल्झिनुहोला। क्रोध र बोलीमा ध्यान राख्नुहोला। स्वास्थ्यमा सावधानी राख्नुहोला। सरकार-विरोधी प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुहोला। मानसिक रुपले तपाईको अस्वस्थ रहनुहुनेछ। परिवारसँग सम्बन्धमा नकारात्मकताको प्रवेश नहोस यसको ध्यान राख्नुहोला।